အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ - Ministry of Education
၂၀၁၂ ခုနှစ် – ၂၀၁၅ ခုနှစ် ကာလအတွက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံအစိုးရတို့အကြား သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အစီအစဉ်
၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ နယူးဒေလီမြို့၌ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအေးမြင့်နှင့် အိန္ဒိယသမ္မတ နိုင်ငံအစိုးရ၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E. Shri Vilasrao Deshmukh တို့မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ် – ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကာလအတွက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံအစိုးရ တို့အကြား သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အစီအစဉ်အား လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။
ပထမအကြိမ် မြန်မာ-အိန္ဒိယ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ပူးတွဲဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းအဝေး
ပထမအကြိမ် မြန်မာ-အိန္ဒိယသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ပူးတွဲလုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းအဝေးကို အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ၊ နယူးဒေလီမြို့၌ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၃) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ နှင့် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံအစိုးရ တို့အကြား မြန်မာသတင်းအချက်အလက် နည်းပညာတက္ကသိုလ် တည်ထောင်နိုင်ရေးကိစ္စ
၂၀၁၂ခုနှစ်၊ မေလ ၂၈ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော်၊ နေပြည်တော်၌ ပြည်‌ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအေးမြင့်နှင့် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံပြည်ပရေးရာဝန်ကြီး H.E. Mr. S.M. Krishna တို့သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံအစိုးရ တို့အကြား မြန်မာသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိုလ် တည်ထောင် နိုင်ရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာအား လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။
MIIT အားတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်အတွက် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံနှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံမှ ပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်သည့် Task Force Team ကို ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသည် မြန်မာသတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ် (MIIT) အား တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်အတွက် မန္တလေးမြို့တွင် ‌မြေဧက (၂၀) ရှိသည့် နေရာတစ်ခုအား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာသတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ်အား တည်ထောင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက် ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ‌မြေနေရာ၊ အ‌ခြေခံအဆောက်အဦများနှင့် ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်များအား ထောက်ပံ့ရမည်ဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရမှ တက္ကသိုလ်အတွက်လိုအပ်မည့် ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများအား ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံအစိုးရသည် မြန်မာ သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၏ တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ကနဦး (၅) နှစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ၏ ကနဦး (၅) နှစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် ကာလတွင် မြန်မာသတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၏ ဆရာ၊ ဆရာမအင်အားကို ကနဦးပထမနှစ်တွင် အန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံမှ ၉၀% နှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ၁၀% ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကနဦးဒုတိယနှစ်တွင် အန္ဒိယသမ္မတ နိုင်ငံမှ ၈၀% နှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ၂၀% ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကနဦး တတိယနှစ်တွင် အန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံမှ ၇၀% နှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ၃၀% ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကနဦးစတုတ္ထနှစ်တွင် အန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံမှ ၅၀% နှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ၅၀% ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကနဦးပဉ္စမနှစ်တွင် အိန္ဒိယ သမ္မတနိုင်ငံမှ ၂၀% နှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ၈၀% ဖြင့်လည်းကောင်း ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ရန် သဘောတူထားပါသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ပညာရှင်များနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမ များ၏ အင်အားသည် အထက်ဖော်ပြပါ ရာခိုင်နှုန်းများအတိုင်း လျှော့ချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာသတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် ဘွဲ့ကြို ဆိုင်ရာသင်တန်းဖြစ်သည့် School of Under Graduate Studies နှင့် ဘွဲ့လွန်ဆိုင်ရာသင်တန်းဖြစ်သည့် School of Post Graduate Studies သင်တန်းနှစ်မျိုးအား သင်ကြားပို့ချနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။
မြန်မာသတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် ၎င်းတက္ကသိုလ်၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ Centre များအား ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်-
(က) Research Centre for E-Commerce and E-Governance
(ခ) Centre for Communication, English and Soft Skills
(ဂ) Centre for Network Management
(ဃ) Centre for Corporate Professional Development
(င) Centre for Community Learning Management
မြန်မာသတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ သင်ကြားပို့ချရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် ကျောင်းသားအင်အားမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
School of Under Graduate Studies (B. Tech/BS in IT)
School of Post Graduate Studies (M. Tech/ MS in Software Engineering)
မြန်မာအစိုးရနှင့် အိန္ဒိယအစိုးရ တို့အကြား မြန်မာသတင်း အချက်အလက်နှင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ် (MIIT) အား ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၇) ရက်နေ့တွင် ပင်မကျောင်းဆောင်သစ် အဆောက်အဦ အုတ်မြစ်ချပွဲ မင်္ဂလာအခမ်းအနားကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းတက္ကသိုလ် ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် MIIT တက္ကသိုလ်၏ Organization Structure သတ်မှတ်နိုင်ရေးကိစ္စများအား Working Level Meeting ဆွေးနွေးပွဲအား ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အိန္ဒိယ-မြန်မာ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုမြှင့်တင်ရေး သင်တန်းဌာန (IMCEITS) သင်တန်း
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၃၁) ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နေပြည်တော်၌ ပြည်‌ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်စွာစိုးနှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဆိုင်ရာ အိန္ဒိသမ္မတနိုင်ငံ၊ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Gautam Mukhopadhaya တို့သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံအစိုးရတို့အကြား India-Myanmar Centre for Enhancement of Information Technology Skills – IMCEITS သင်တန်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာအား လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။
IMCEITS သင်တန်းဌာနသည် (၁-၄-၂၀၁၄) ရက်နေ့မှစ၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ CDAC ၏ အသိအမှတ်ပြု Authorized Training Center အဖြစ် စတင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
Total Hits : 1141556811